फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुस् कतिमा हुँदैछ आजको कारोबार ?
काठमाडौँ । आइतबार सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ३ रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलाको २ सयले बढेर ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ पनि २ सयले बढेर ९१ हजार रुपैयाँ प्रतितोला रहेको छ । त्यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि १५ रुपैयाँले...
सरकारले दियो निर्वाचन गराउन सात अर्ब ...
असार १९, 2078 काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई उक्त बजेट सीमासम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान ...
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, यी हुन् उक...
असार १७, 2078 काठमाडौं । धितोपत्र कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से १९.१२ अंकले बढेको छ । यससँगै नेप्से सूचक २ हजार ८४३ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । आज ने...
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज ?
असार १६, 2078 काठमाडौं । बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार तोलामा एक सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबार प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज ...
नेप्से घट्दा लघुवित्त उपसमूहको शेयरमा...
असार १५, 2078 काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागे पनि लघुवित्त उपसमूहका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । बजारमा आज तीव्र उतारचढावका भई अधिकांश उपसमूहको शेयर मूल्य घटेको छ । नेपाल स्टक ...
कर्णालीमा सुन अभाव, १६ करोडको कारोबा...
असार १५, 2078 काठमाडौँ । कर्णालीमा सुनको अभाव हुँदै गएको छ । राज्यबाटै हुने सुनको असमान वितरणका कारण कर्णालीमा सुन अभाव हुँदै गएको हो । प्रदेशमा मागअनुसारको सुन आपूर्ति गर्न नसकिएको सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले बताएको छ । यो...
उदयपुरमा आँपको उत्पादन घट्यो, मूल्यमा...
असार १४, 2078 काठमाडौँ । उदयपुरको स्थानीय बजारमा आँपको मूल्य आकासिएको छ । उत्पादनमा कमी आउँदा यो वर्ष उदयपुरमा आँप महँगिएको हो । बजारमा आँपको मूल्यमा वृद्धि भए पनि किसानले त्यसअनुसारको बजार मूल्य पाउन सकेको छैन । आँप दाना लागेको समयमा...
सूर्यविनायकमा एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ...
असार ११, 2078 काठमाडौँ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कूल रु एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख जुना बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालु तथा पूजीँगततर्फको बजेट सा...
पाँचथरको तुम्बेवा बजेट ३७ करोड, बिकास...
असार ११, 2078 पाँचथर । सभ्य र समृद्ध तुम्वेवाको आधार, कृषि पर्यटन र गुणस्तरीय पुर्वाधार’ को लक्ष्यसहित पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकाको नवौ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । जिल्लाकै सबैभन्दा सानो स्थानीय तह भनेर चिनिएको पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपाल...
सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुस् कति छ आज ...
असार ९, 2078 काठमाडौँ । निरन्तर घटबढ भइरहेको सुनको मुल्य आज बुधबार पुनः ३०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ३०० रुपैयाँले घट्दै ९० हजार ७०० रुपैयाँमा झरेको हो । गत मंगलबार प्रतितोला ६०० रु...
व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्छ की पर्दैन ? क...
असार ८, 2078 काठमाडौं । लामो समयको निषेधाज्ञापछि आजदेखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको छ । यद्यपि कर तिर्ने समस्याले आम मानिस आत्तिएका छन् । कसले कति कर तिर्नुपर्छ ? यो पनि थाहा नपाउँदा समस्या भइरहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्तिगत...
असार ५, 2078 काठमाडौं । नेपालमा भारत बाहेकका देशहरुको मुद्रा विनिमय दर दैनिक रुपमा परिवर्तन हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ८८ पैसा...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोरोना प्रभा...
असार ४, 2078 काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ग्राहकलाई प्रचलित ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले २०७८ साल असार मसान्तभित्र कर्जाको किस्ता तथा ब्याज बुझाउने कोभिड–१९ बाट प्रभावित ग्राहकलाई...
असार ३, 2078 काठमाडौँ । सुनको भाउ आज तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलाको ९३ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको सुनको मूल्य आज घटेर ९२ हजार रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज ...
निषेधाज्ञासँगै घट्यो डिजिटलमार्फत भुक...
असार २, 2078 काठमाडौँ । गत वैशाखदेखि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएसँगै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने कारोबार रकममा कमी आएको छ । निषेधाज्ञाअघिको तुलनामा निषेधाज्ञा जारीसँगै डिजिटल भुक्तानीको कारोबार रकममा कमी आएको हो । ...
← अघिल्लो 12…5678910 11 12 13 … 93 94 पछिल्लो →